YouTube Thumbnail jenareta
Zvinoita here kuti ugadzire thumbnail yeYouTube vhidhiyo? Ehe! Izvo zvinobatsira kuratidza zvigunwe zvine zvinongedzo mumabhara epadivi, kana kutsiva iyo Youtube embed kodhi nevhidhiyo mukati meRSS feed kana email. Ichi chatova chimiro chemamwe mapuratifomu eemail, senge WordPress Pepanhau Rekunyora Plugin. Kuedza kunyora yako wega Youtube thumbnail jenareta inogona kunge iri basa chairo.
Nhau dzakanaka ndedzekuti haufanire kugadzira thumbnail, Youtube ine akati wandei yakakumirira.
Heino vhidhiyo URL - cherekedza vhidhiyo id?
Heano mifananidzo mune akati wandei saizi uye mafuremu, cherekedza vhidhiyo id yakadzamidzirwa mu URL:
Nzira iri nyore yekumisikidza zvigunwe mubara rako repadivi kungave kuisa iyo URL yemufananidzo nemaoko se tsika munda, wobva waita yako tema kuratidza yako tsika munda kana iripo.
Tags: tora youtube thumbnailThumbnailyoutube mufananidzokuona YouTubeyoutube padiviyoutube padivi widgetyoutube thumbnail
Jun 22, 2010 na6:26 AM
Doug, handina chokwadi chekuti ndanzwisisa pane zvauri kutaura pano. Ini ndaigona chaizvo kushandisa thie ficha. Iwe urikuti iwe unogona kungotora yako YouTube vhidhiyo URL woisa /0.jpg kwairi kuti utore thumbnail? Uyu mufananidzo une simba here?
Muenzaniso wako unokwira ku/2.jpg. Ndiyo furemu 2 here? Ko 0, 1 kana 2 inomiririrei? Iwe unogona kuenda kumusoro kwakadii?
Ndine urombo nemibvunzo yese asi izvi zvakanyandura kufarira kwangu. Ndatenda!
Jun 22, 2010 na9:28 AM
Kwete, haugone kungoisa /0.jpg - cherechedza subdomain uye nzira yakati siyanei. Kwete, mufananidzo wacho hauna simba, wakamira. Handina chokwadi chekuti nhamba yacho inomiririrei asi 0 mufananidzo muhombe, 1 na 2 anoita kunge mifananidzo midiki inobva kumafuremu akasiyana.
Ndanga ndichida kutaura kuti mazvita zvakanyanya nekuda kweizvi! Ndakagadzirisa kodhi yangu kune zano rako uye yakashanda.
Jul 30, 2011 pa 5: 45 AM
Brilliant, ndizvo zvandaitsvaga. Tsitsi zvigunwe zviri 120 × 90 chete
Hi Ben! Ndatenda nekumbomira… kana ukatarisa 0.jpg, saizi i480px ne360px.
Sep 28, 2011 na2:35 PM
Ruzivo runoshanda zvakadaro! ndinokutendai zvikuru!:D
Sep 28, 2011 na2:42 PM
Gumiguru 17, 2012 pa 4:03 AM
Ndatenda neizvi. BTW, tinogona here kutsanangura hupamhi uye urefu hwemifananidzo?
Aug 16, 2015 na3:27 PM
Zvinosuruvarisa, kwete. YouTube inoseta kureba nehupamhi otomatiki.
Wow, zvakanaka! handina kumbozvifunga.